Nkwado Ajụjụ ⚙️ | ThatsLuck.com
►M ebudatara ngwanrọ, mana enweghị m ike iji ụfọdụ atụmatụ, gịnị kpatara ya? Ihe omume ndị a na-ebudatara n'efu, ụfọdụ bụ n'efu, ndị ọzọ ga-arụ ọrụ na koodu. Iji mara ka esi enweta a ebighị koodu gụọ peeji ahụ ►Fzụ ahịa Ajụjụ.
Ala m koodu ntinye nke ngwanrọ, enwere m ike ịrịọ ya site na email? Ntinye koodu ndị ahụ dị n'ime akwụkwọ ọgụgụ Kindle ndị e rere na Amazon, a ga-eziga arịrịọ ahụ ozugbo na nkwado Amazon.
►M ebudatara ngwanrọ ma Windows na-adọ m aka na ntị na ọ nwere ike ịdị ize ndụ, gịnị kpatara ya? Mmemme nke ThatsLuck ha niile dị nchebe ma nwekwaa nje 100%, na-enweghị asambodo ndị Microsoft chọrọ ka ha ghara igosi ịdọ aka na ntị ndị a (asambodo ndị a na-akwụ ụgwọ), ọ nwere ike ime na mbido mbụ nke mmemme ahụ gosipụtara ịdọ aka na ntị a makwaara dị ka "smartscreen".
N'okwu a, dị nnọọ pịa ihe "Ozi ndị ọzọ" wee banye "Gbaa ọsọ".
My antivirus achọpụtara trojan na mmemme, why? Dị ka e dere na mbụ, niile mmemme nke ThatsLuck ha bụ 100% nje free. Otú ọ dị, ịbụ onye na-agbakọta na nchịkọta na-eme ka ndị na-arụ ọrụ iji belata nha ha wee belata nbudata, ọ na-eme na ụfọdụ antivirus free (karịsịa Avast) na-emepụta mkpu ụgha, na-egbochi ma ọ bụ na-ehichapụ faịlụ ahụ na kọmputa. Na nke a, m nwere ike ikwu ịgbanwe antivirus. ọ dị mma, gbaara ya ma gosipụta ya. ThatsLuck.com -abụghị nwere Trojans, spyware, nje ma ọ bụ ihe ndị ọzọ nwere ike imerụ kọmputa gị. Ọ bụrụ na ị pịa njikọ na-esote ị nwere ike ịlele ya akụkọ nche emepụtara maka ThatsLuck.com dal ►Nkwupụta Ngosiputa Google.
Mgbe ịmalite mmemme a njehie ozi a na-egosi, why?
Mmemme niile chọrọ njikọ ịntanetị na-arụ ọrụ iji rụọ ọrụ, ozi a njehie 1784 na-egosi na njikọ netwọk na-efu ma ọ bụ dị nwayọ nwayọ, lelee ya wee gbalịa ịmalite sọftụwia ahụ ọzọ.
Enwere m ike iji mmemme na Mac? Mmemme nke ThatsLuck - belụsọ na akọwapụtara ya ọzọ - agbanyere dịka 32/64 bit Windows executables. Azịza ya mere mba, agbanyeghị enweghị m ike ewepu na iji a Windows emulator maka Mac ha nwere ike n'enweghị ọrụ.
Kedu ihe kacha nta iji chọọ mmemme ahụ? Ha bụ ndị a: PC nwere Windows 7 ma ọ bụ sistemụ dị elu karịa, 2 GB nke ebule, ihuenyo nwere mkpebi kacha nta 1366 × 768.
ProgramA usoro ihe omume roulette nke m budatara ma rụọ ọrụ anaghị pịa dị ka o kwesiri na tebụl egwuregwu cha cha, olee otu m ga-esi mezie ya? Nke a nwere ike ịdabere na ọtụtụ ihe, agbanyeghị ma ihe ngwọta nke ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ ọ bụla bụ ịmalite mmemme ahụ "dị ka onye nchịkwa". Iji mee nke a, dị nnọọ pịa executable faịlụ na nri òké bọtịnụ ma họrọ nhọrọ "na-agba ọsọ dị ka onye nchịkwa". Ihe ọzọ dị ezigbo mkpa bụ na folda mmemme ahụ dị na desktọọpụ na mgbe na mgbọrọgwụ nke isi diski ike (na-emekarị C :), ebe, ihe atụ, na Windows nchekwa na-emi odude.
► Enwere m kọmputa abụọ na laptọọpụ, enwere m ike iji mmemme ahụ na PC m niile? Ee n'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ ị nwekwara ike ịnyefe ya ma bido ya ozugbo site na USB pendrive na PC nke ịhọrọ.
Don't Enweghị m onye na-agụ akwụkwọ maka Kindle ebooks, kedu ka m ga-esi guo akwụkwọ ahụ iji chọta koodu ọrụ? Ọ bụrụ na ị na-eji PC ma ọ bụ Mac, ị nwere ike ibudata ►Ngwa ngwa ngwa Amazon maka Pc / Tablet / Smartphone gị iOS na gam akporo.
Ahụghị azịza ị na-achọ? Kpọtụrụ m na n'elu ihe niile banye na ►YouTube maka nlele na sọftụwia na - abịa abịa!